कस्मिर विवादः राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को बैठकमा के भयो ? - Everest Dainik - News from Nepal
कस्मिर विवादः राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को बैठकमा के भयो ?
एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्मा शुक्रबार भारत प्रशासित कस्मिरमा अनुच्छेद हटाएको विषयमा अनौपचािरक वैठक भएको छ । पाकिस्तानले यस विषयमा पत्र लेखेपछि राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको अनौपचारिक बैठक आयोजना गरिएको थियो ।
यो क्लोज डोर बैठकपछि राष्ट्र संघका भारत, चीन र पाकिस्तानका राजदूतले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्र संघका लागि भारतीय प्रतिनिधिले अनुच्छेद ३७० हटाउने विषयमा भारतको अन्तरिक मामिला भएको र अन्य देशसँग सम्बन्धित नभएको बताएका थिए ।
भारत सरकारले जम्मु तथा कस्मिरको आर्थिक, सामाजिक विकासमा लागि यो निर्णय गरेको बताएका थिए । जम्मु–कश्मिरको अवस्थामा सामान्य गर्नका लागि धेरै वटा निर्णयहरु गरिएको बताएका थिए । चीनका प्रतिनिधिले सुरक्षा परिषदका देशहरुले यो विषयलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताए ।
उनले एकलौटी निर्णय हुन नहुने बताए । चीनले यो निर्णयहरु राष्ट्र संघका प्रस्तावअनुसार समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले कस्मिरको अवस्थामा निकै खतरनाक रहेको बताए । News24 बाट साभार
ट्याग्स: कस्मिर विवाद, राष्ट्र संघ